Ukusika iteknoloji-I-AOOD Technology limited
Itekhnoloji yokusika-ibisoloko isisiseko sophuhliso lwe-AOOD okoko sisekayo. Sinobuchwephesha obukhokelela kwitekhnoloji yombane ukusombulula iingxaki ezintsonkothileyo zokuhambisa umbane kwiinkqubo ezahlukeneyo. Siyakwazi ukudibanisa kunye ne-fiber optic / i-coax joint rotary ukunika abathengi bethu izisombululo ezipheleleyo ezijikelezayo kunye nokusebenza ngokuthembekileyo.
Kule minyaka ingama-20 idlulileyo, sinikela ingqalelo engakumbi kwimfuno yamasongo esiliphu kwizicelo eziphezulu. Kwicandelo lokhuselo, singaphatha ngobuchule ukuya kuthi ga kumawaka wamandla aphezulu kunye neesekethe zedatha kwindawo encinci, kwaye siqinisekise ukuba la makhonkco okutyibilika aya kuba nokusebenza okuphezulu kunye nokuthembeka kwimeko enzima. Side saqulunqa uthotho lwamakhonkco amancinci amancinci amancinci ukuhlangabezana nomqondiso weendlela ezininzi kunye nokudluliselwa kwedatha kwindawo encinci. Kwintsimi yaselwandle, sinokubonelela ngokudibanisa iiyunithi zeringi yesityibilikisi se-ROV esinamalungu ajikelezayo e-fiber optic kunye namalungu ajikelezayo ajikelezayo, agutyungelwe nge-IP68 kunye ne-oyile egcwalisiweyo yokusebenza kwe-subsea. Kwicandelo lezonyango, iiringi zethu ezinkulu zesikena se-pancake slip yezikena ze-CT zinokubonelela ukuya kuthi ga kwi-2.7m ngokuhanjiswa kunye nokuhanjiswa kwedatha ngesantya esiphezulu> i-5Gbits.